UGoogle uyazi apho ukhoyo, nokuba unayo indawo esebenzayo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Android, ngokubanzi, Izaziso
Android Ayisiyiyo kuphela inkqubo esetyenziswayo esetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, kunjalo kumazwe afana neSpain ubukho bayo bumele ukuba bube bodwa, kwaye malunga neepesenti ezingama-85 zabasebenzisi abasebenzisa iifowuni eziphathwayo kweli lizwe babotshelelwe kwi-Android. Yile ndlela uGoogle ayenze ngayo inkqubo yakhe yokusebenza ukuba ibe yinkolo.
Nangona kunjalo, amandla anjalo anezinto ezintle kwaye ngamanye amaxesha anezinto ezimbi. Umzekelo ocacileyo yile UGoogle uqinisekisile kutsha nje ukuba ayikhathali nokuba unayo indawo oyenzileyo okanye hayi, iyazi ukuba uphi ngalo lonke ixesha ... bayenza njani?
UGoogle uqinisekisa ukuba umsebenzisi uhlala ekuyo, oko kuthetha ukuba phakathi kwezinye izinto, inkampani Musa ukuba mbi Isebenzisa le datha ukuze uyiqokelele kwaye ithengise ngayo ukwenza iipateni zentengiso. Nangona kunjalo ... ubucinga ukuba "ukhuselekile" ukuba ukhubaze ubume bendawo? Akukho nto iqhubekayo kwinyani. UGoogle usebenzisa amathuba e-eriyali yenkqubo ukwazi ukuba siphi ngamaxesha onke. Oku kuye kwafunyanwa ngamakhwenkwe e Quartz kwaye impendulo engummangaliso uGoogle ayinike ukufumanisa okunjalo ngokuqinisekileyo ayizukushiya ungakhathali.
NgokukaGoogle, kubalulekile ukuba sazi ukuba siphi na ngamaxesha onke ukuze siphucule isantya esithunyelwa ngaso imiyalezo kunye nesaziso sokutyhala. Esi sizathu esikhokelela kuGoogle ukuba sibekwe njengoMzalwana omkhulu kwi-universal scale. Ngapha koko abakhange babonelele naziphi na iinkcukacha zendlela oku okunempembelelo ngayo ekuphuculeni inkonzo. Okwangoku, into ekufuneka uyazi kukuba ngekhe ukwazi ukulahla le nkqubo yendawo yoonxantathu, ke, Ukuba uyenza ingasebenzi indawo, kungenxa yokugcina ibhetri, kuba uGoogle uhlala ekufumana ngendlela efanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UGoogle uyazi apho ukhoyo, nokuba unayo indawo enikwe amandla